Tan-tsoroky ny fitondrana foibe :: Sakanan-dry Lalao Ravalomanana sahady ny fanavaozana ny kianjan’i Mahamasina • AoRaha
Tan-tsoroky ny fitondrana foibe Sakanan-dry Lalao Ravalomanana sahady ny fanavaozana ny kianjan’i Mahamasina
Midrinkina amin’ny heviny. Tsy takona afenina intsony ny disadisa eo amin’ny fiadidiana ny Repoblika sy ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny kaominin’ Antananarivo renivohitra mikasika ny tetikasa fanavaozana ny kianjaben’i Mahamasina. Taorian’ny fisiana angidim-by misy ny sary famantaran’ny Tafika malagasy nipetraka teo afovoan’ity kianja ity, omaly, dia namoaka fanambaràna manohitra tanteraka an’io fikasan’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ireo mpiara-miasa aminy amin’ny fanamboarana an’io kianja io ny sampan-draharahan’ny serasera ao amin’ny kaominin’Antananarivo renivohitra. «Manan-danja saingy tsy laharam-pahamehana ho an’ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo ny fanamboarana ny kianjan’i Mahamasina», hoy ry zareo etsy Analakely.
« Ny fanajariana an’ireo fotodrafitrasa mikasika ny famatsiana rano madio sy ny fanadiovana ny tanàna no tokony hahamaika”, hoy hatrany ilay fanambaràna. Notsiahivin’ireo tompon’andarikitra ao amin’ny kaominina fa mila fahazoan-dalana sy fifampiresahana ary tokony mbola dinihina sady laniana mandritra ny filan-kevitra monisipaly ny fikitihana na fanamboarana an’ireo fotodrafitrasa sy ny fananana tantanan’ny kaominina.
Loharanom-baovao avy amin’ny Tafika anefa no nahalalana fa angidim-by nanao sidina andrana ho fanomanana ny fiatrehana ny fahatongavan’ny Papa Ray masina Fransoa eto Antananarivo no notanterahina teny Mahamasina, fa tsy mbola misy resaka asa fanamboarana ny kianjan’i Mahamasina akory.
Fampivoarana ny tanàna
Nandà ny voalaza fa fanirahana mpandraharaha hanao tombana amin’ny fanamboarana ny kianja etsy Mahamasina rahateo ny fiadidiana ny Repoblika, omaly. « Tsy mbola mahalala an’izany ny tenako hatramin’izao. Tsy nisy ny baiko mikasika izany », hoy i Rinah Rakotomanga, talen’ny serasera sy ny fifandraisana eny Iavoloha. Raha ny fomba fijerin’i Rinah Rakotomanga dia « karazana filam-baniny fotsiny ihany no ataon’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny kaominina mikasika ny raharaha ».
« Tokony ho azo atao tsara ny mijery ny zava-misy eny an-toerana, satria fananam-panjakana ihany koa io kianja io. Izy ireo izany no tsy te hampivoatra an’Antananarivo », hoy izy sady nanipika fa « azon’ny Filoham-pirenena atao tsara ny manamboatra ny kianja rehefa izay no fanapahan-keviny ».
Baolina lavalava – Top 20 :: Resin’ny Uscar ny Mang’art